भयानक बन्दैछ, भिटामिन डीको कमी – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १२:२१
भिटामीन ‘डी’ चिल्लोमा घुल्ने स्टेरोइडल (कोलेस्टेरोलबाट बनेको) भिटामिन हो । यो भिटामिन प्राकृतिक रुपमा धेरै कमखानेकुराहरुमामात्रपाईन्छ । क्यालसियम र फस्फोरस जस्ता महत्वपूर्ण खनिजतत्वहरुको उपपाचनका लागि आवश्यक यो भिटामिनको अभाव अहिले आम रुपमै देखिनथालेको छ । आन्तरिक रुपमा शरीर भित्रै पनि बन्न सक्ने हुनाले धेरै वैज्ञानिकहरू यसलाई भिटामिन नमानेर हर्मोन पनि मान्दछन् ।
प्राकृतिक रुपमा धेरै कमखानेकुरामा भिटामिन डी पाईन्छ । विशेषत समुन्द्रि माछा (टयुना, सालमोन, म्याकारोलको कलेजोमा भिटामिन पाईन्छ । थोरै मात्रामा अन्य जानवरको कलेजो, पनिर, अण्डाको पहेलो भाग र दुधमा पनि भिटामिन डी पाइन्छ । केही च्याउहरुमा पनि थोरै मात्रामा भिटामीन डी मिल्न सक्छ । प्राकृतिक रुपमा धेरै कम तत्वहरुमा भिटामिन डी पाईने भएकाले आजकल दुध, मख्खन, पनिर र तैयारी खानेकुराहरूमापनि भिटामिन डी मिसाउन थालिएको छ ।
२) क्याल्सियम र फष्फोरस जस्ता तत्वहरुलाई हड्डीमा पुर्याएर अस्थि घनत्वलाई बरकरार राख्नपनि भिटामिन डी को आवश्यकता पर्दछ ।
३) मृगौलामा मुत्रको रुपमा खेर गईरहेको क्याल्सियमलाई पुनःअवशोषण गरि क्याल्सियम नष्ट हुनदिदैन ।
८) मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो जस्ता कोमलअड्डहरुको रोगहरुको गम्भिरतालाई घटाएर रोगलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउँदछ ।
९) क्यान्सरप्रतिकार गर्न मद्दत पु¥याउँदछ
१०) डर चिन्तातनाव र उदासिनताको समस्याकमगर्न सहयोग गर्दछ ।
भिटामिन डी को कमीले बच्चाहरुमा रिकेट्स र वयस्कहरुमा अष्टियोमलासिया नामक रोगहरु लाग्दछ । यि रोग लागेकाहरुको आन्द्राले पर्याप्त क्याल्सियम अवशोषित गर्न सक्दैन । फलतः रगतमा क्याल्सियम र फस्फोरसको स्तर यथावत राख्न शरीरले हड्डी र कार्टिलेजहरुमा संकलित क्याल्सियम र फस्फोरस निकालेर रक्त स्रत कायम राख्दछ । भिटामिन डी को कमि भए पिसाबमा खेर गईरहेका क्याल्सियम र फस्फोरसलाई पनि पुनअवशोषण गरेर फर्काउन नसक्दा पिसाबमा यि तत्वहरुको उत्सर्जन देख्न सकिन्छ ।
यि सबै घटनाहरु घट्दा मुुख्यतःनिम्नलिखित लक्षणहरु देख्न सकिन्छ :
२) हड्डी कमजोर भईभाच्चिने चर्किन र बाड्डिने ।
३) जोर्नीहरु दुख्ने, चलाउदा कटकट आवाजआउने
९) बेचैनी बढ्ने-भावनात्मक विचलन भइरहने ।
१२) हर्मोनमा असन्तुलन
१३) थकान ।
१४) मांशपेशी एवं हड्डीमा दिर्घकालिन पीडा ।
१५) तौल बढ्ने ।
१६) मांशपेशीहरु बाउडिने।
१७) जोर्नी दुख्ने ।
१८) निन्द्रा कचमिच रहने ।
१९) मानसिक तनाव ।
२०) स्मृतिनास ।
२१) टाउको दुख्ने ।
२२) रक्तचाप बढ्ने ।
२३) नरमाइलो लागि रहने ।
२४) एकाग्र, ध्यानात्मक र लयात्मक हुन नसक्ने ।
२५) इच्छाशक्तिमा कमि ।
२६) घोर निरासा ।
२७) बेचैनी ।
४) धेरै कालो छालाः छालामा भएको मेलालिनपिगमेण्टले सूर्यको अल्ट्रामाइलेटलाई प्रतिरोध गरि भिटामिन बन्न दिदैन ।
बढी भए के हुन्छ
शरीरमा चाहिने भन्दा बढी भिटामिन डी भए पनि नशा र मांशपेशीले संगठित रुपमा कार्य गर्न नसक्ने मांशपेशीको टोन कम हुने, वेचैनी बढ्ने, कोमल तन्तुहरुमा क्याल्सियम जम्मा हुने, मृगौलामा पत्थरी पलाउने मृगौला फेल हुने र हड्डी र कलेजहरु असाधरण रुपले बढ्ने जस्ता समस्या देखा पर्दछ ।
कमी भएको कसरी थाहा पाउने
भिटामिन डी को रक्तस्तर ठीक छ छैन भनेर भिटामिन डी २५ हाइड्रोक्सी–कोलेक्यल्सिफेरोलको रक्त–स्तर जाँच्नु पर्ने हुन्छ ।
केहि खानेकुरामा भिटामिन डी पाइन्छ
भिटामिन डीको कमीको प्राकृतिकउपचार
भिटामिन डी कम भएकाहरुले यो कमिलाई पुर्ति गर्न सर्वप्रथम शरीर भित्रै भिटामिन डी बन्ने क्रियालाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि सूर्यको किरणमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हप्तामा १ वा २ दिन वा महिनामा ५-७ दिन वा वर्षमा ५०–६० दिन हरेक पल्ट ४५ मि. देखि १ घण्टा सम्म घाममा बसियो भने पनि शरीरलाई चाहिने जति भिटामिन डी शरीर भित्रै बन्न सक्छ। घाममा बस्दा सकभर निवस्त्र भएरै बसेको राम्रो हो।
निवस्त्र हुन सम्भव नभए कमसे कम ८०–८५% हिस्सा कपडा विहिनहुनआवश्यक छ । घाम जतिच र्को भयो त्यति नै भिटामिन डी को संश्लेषण ज्यादा हुन्छ तर चर्को घाममा सूर्यको अल्ट्राभाइलेट विकिरणले अन्य अड्ड र छालालाई आघात पु¥याउने हुँदा सकभर बिहानको घाम ताप्न उचित हुन्छ।
क. भोजानद्वारा उपचारः
भिटामिन डी खानाको माध्यमद्वाारा पनि प्राप्तगर्न सकिन्छ । भिटामिन डी को मूख्य प्राकृतिक श्रोत माछा, माछाको तेल, कलेजो, मृगौला, अण्डा जस्ता फल मासु हुन तर मासु स्वस्थकर खाना नभएकाले भिटामिन डी को लागि मासु नखाएर सप्लिमेण्ट लिनु उपयूक्त हुन्छ। आजकल भिटामिन डी मिसाइएको दहि, दुध, तोफु, चिज, पनिर र अन्य खानेकुराहरु पनि पाईन्छ । यो चिल्लो पदार्थमा घुल्ने भिटामिन हो । तसर्थ भिटामिन डी लाई सहि सदुपयोग गर्न स्वस्थकर चिल्लो पदार्थ खानुपर्ने हुन्छ । विशेषतः तैतिय फलफूल, सुख्खा फलफूल र क्रिमयूक्त दुध तथा दुग्ध परिकार आदि खान स्वस्थकर हुन्छ भिटामिन डी युक्त खानेकुराहरुको साथमा क्यालसियमयुक्त खानेकुराहरुको सेवन गर्न पनिअपरिहार्य हुन्छ । दुध र दुग्धजन्य परिकारहरु हरियो सागपात, पालुगो, लट्टे, लुडे, वेथे, च्याउ, सिबी, बोडी, काउली, ब्रोकाउली, चुकन्दर, टमाटर, केरा सुन्तला, सिंघाडा आदिमा प्रसस्त क्याल्सियम पाईन्छ । कोदो, फापर, गहत, मकै, जवार, बाजरा, जूनेलो, सामा, कागुनीचिनो आदिमा पनि प्रशस्त क्यालसियम पाईन्छ ।
ख. व्यायमद्वारा उपचारः
श्रम वाव्यायम गर्ने बानीले शरीरलाई स्फूर्त एवं तन्दुरूस्त बनाइरहन मद्दत गर्दछ । व्यायाम गर्दा नशा नाडीमा रक्त संचार भइरहने हुदा भिटामिन डी लाई कोष कोष सम्म पु¥याएर यसको कार्यलाई पूर्ण गर्न मद्दत पु¥याउदछ । दैनिक ३० मिनेटको व्यायम हर कसैलाई आवश्यक पर्दछ । व्यायम गर्दा एकपल्ट शरीरका सबै जोर्नीहरु चल्नु पर्नेछ र एकपल्ट सररर पसिना फुट्नु पर्ने र शरीरका भित्रीअंगको पनि व्यायम हुनु पर्ने हुन्छ ।
४) पेटका समस्या भएकाहरुले यथाविधि उपचार गर्नुपर्दछ । कलेजो र मिर्गैलालाई प्रभावित पार्ने विशेष उपचारहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५) बदामको तेल दुधमा मिलाएर खादा पनि यो रोगमा फाइदा पु¥याउँदछ ।
६) भिटामिन डीको स्तर सुधार्नको दैनिक ४५ मि.देखि १ घण्टा सम्म कटिवस्त्र मात्र लगाएर घाम तापौं ।
७) बाहिर घुमफिर गर्न निस्कदा सनब्लक लोसन वा सनस्क्रिनको प्रयोग नगरौं ।
८) घाम तप्न नपाउने वा नसक्नेहरुले भिटामिन डी मिसाइएको आहारहरुलाई खानामा समावेश गरौ ।
९) भिटामिन डी को स्तर कम देखिएकाहरुले भिटामिन डी को सप्लिमेन्ट लिने गरौ ।
१०) कमन भएकाहरुले राम्रो क्वालीटिको मल्टिभिटामिन लिने गरौ ।
११) बेलाबेलामा भिटामिन डी को स्तर चेक जाँचगर्ने गरौं ।
१२) तेल मालिसले भिटामिन डी को कमिमा राम्रो काम गर्दछ ।
१३) कुरीलोको जरा मेथीको धुलो वाअंकुरित, विजयशालको काठको सेवनले पनि भिटामिन डी को कमीले उत्पन्न समस्याहरु समनगर्त मद्दत गर्दछ ।
लेखक योगी नरहरिनाथ योग तथाप्राकृतिकचिकित्सालय भरतपुर–१ वागीश्वरी चितवनका मेडिकल डाईरेक्टर हुन्।